NetEnt गेमिङ यसको 20 औं जन्मदिन जन्मोत्सव मनाउने छ र यो NetEnt रक श्रृंखला केही नयाँ र सुविधा-सम्पन्न अनलाइन मोबाइल स्लट शुरू. Guns N Roses gotahuge response from the players and now is the time to check out Jimi Hendrix, ब्रान्ड नयाँ स्लट NetEnt गेमिङ विकास खेल.
यो अचम्मको मोबाइल स्लट खेल 22 अप्रिल मा जारी छ, 2016. यो NetEnt द्वारा एक अविश्वसनीय खेल 1960 को एक महान संगीतकार समर्पित छ. हो, हामी पौराणिक संगीतकार Jimi हेन्ड्रिक्स भन्दा अन्य कुनै पनि कुरा छन्. यो खेल आँखा-पक्रने ग्राफिक्स छ, बोनस सुविधा र Jimi हेन्ड्रिक्स को सबै भन्दा राम्रो साउन्ड luring. गरेको यस बारे केही थप तथ्य पत्ता लगाउन गरौं शानदार नगद मनोरञ्जन खेल.
खेल गरेको विषय र खेल-प्ले प्रकट गरिएको छ:
Jimi हेन्ड्रिक्स स्लट5हुनेछ×3 संग रील स्लट खेल 20 स्थिर शर्त लाइनहरु. यो खेल तपाईं सिद्ध मंच धेरै मुक्त स्पिन सुविधाहरू खेल्न दिनेछु. खेलाडी एक ठूलो रकम जीत सबै भन्दा राम्रो मोड छान्न सक्नुहुन्छ. साथै, त्यहाँ दुई नयाँ बोनस सुविधाहरू NetEnt द्वारा शुरू खेल मा खेलाडी चासो उकास्न छन्.
यो 60s 'रेट्रो शैली विषय जस्तो देखिन्छ किनभने विषय प्रभावशाली छ. बैजनी र गुलाबी रंग पृष्ठभूमि, उच्च-वर्ग 3D ग्राफिक्स र Jimi हेन्ड्रिक्स गरेको प्रसिद्ध साउन्डट्र्याक यो खेल सुपर रोमाञ्चक बनाउन. The symbols are perfectly designed for the theme; सेतो गिटार समावेश, रातो गिटार, Jimi हेन्ड्रिक्स, फूल, शान्ति संकेत र हृदय. ती सबै उच्च-मूल्य प्रतीक हो, जो तपाईंले केही ठूलो क्रेडिट जीत प्रत्येक स्पिन समयमा भूमि पर्छ.
फ्री spins र बोनस सुविधाहरू:
Jimi हेन्ड्रिक्स स्लट खेल मा नि: शुल्क स्पिन सुविधा गन्स गुलाब को बोनस पाङ्ग्रा सुविधा एकदम समान हुनेछ. तपाईं तल दिइएको मुक्त स्पिन सुविधाहरू कुनै पनि हुन सक्छ:
Crosstown ट्राफिक: खेल तपाईंलाई इनाम दिनुहुनेछ6ठूलो जीत लागि केही wilds साथ निःशुल्क spins.
सानो भाग: भूमि3तिनीहरूलाई को र त्यहाँ तपाईं आफ्नो मुक्त spins जाने. तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन्6गर्न 12 तिनीहरूलाई को.
पर्पल हेज: प्लेयर कमाउन हुनेछ6गर्न 12 मुक्त spins र प्रत्येक स्पिन मा बैजनी तुवाँलो wilds हुनेछ.
सिक्का पुरस्कार: तपाईं सिक्का सङ्कलन, तपाईंले केही अनियमित multipliers लागि हो. तिनीहरूलाई केही रूपमा 30x रूपमा ठूलो हुन सक्छ.
पुन: spins र बैजनी तुवाँलो अनियमित wilds:
एक पटक यो मुलुकमा जंगली प्रतीक कुनै पनि रील मा भूमि गर्न सक्छन् र, यो एक जंगली प्रतीक सबै बाँकी प्रतीक विकल्प सक्नुहुन्छ. फलस्वरूप, प्लेयर एक ठूलो जीत को लागि एक राम्रो विजेता अनुक्रम हुन्छ. तर यो खेल एक मोड छ. यसरी तपाईंले केही पुन spins जित्न सक्छौं किनभने चार वा बढी रातो गिटार अवतरण एकदम सुन्दर हुन सक्छ. यो स्ट्याक्ड गिटार टाँसिएको हुनेछ र रील अन्य प्रतीकहरू स्पिन हुनेछ. तपाईंले यो खेलको यथासक्य पुरस्कार जीत प्रतीक को एक राम्रो अनुक्रम प्राप्त गर्न सक्छन्.
यो जूरीको फैसला:
यो एक सैद्धान्तिक RTP छ 96.1%. खेल प्ले धेरै twists संग, खेलाडीहरू बढ तिनीहरूको चासो राख्न सक्छ. पहरामा श्रृंखला पहिले देखि नै एक उत्कृष्ट खेल बुझाइएको छ, गन्स गुलाब. र Jimi हेन्ड्रिक्स बडा र राम्रो हुनेछ छ !